Food ọkwa Carboxymethyl cellulose sodium (CMC) - Shanghai n'Eziokwu Chem. Co., Ltd
Food ọkwa Carboxymethyl cellulose sodium (CMC)
Sodium Carboxymethyl cellulose (CMC) bụ na-acha ọcha ma ọ bụ acha ntụ ntụ na bụ odorless, keenweghiuto na non-toxic.It elu hygroscopicity na bụ soluble na mmiri na-etolite a oké mmiri mmiri. Ọ bụ a polyanionic electrolyte na bụghị fermented.It nwere ezigbo okpomọkụ na-kwụsie ike .resistance ka nnu na film na-akpụ ihe onwunwe. 1.Prevent protein na acid mmiri ara ehi si condensing, na ntọala ma laminating. 2.Due ya pụrụ iche na-eji ire ụtọ sugar tapawa ala mgbe ọ dissolves, ọ ka ọṅụṅụ na-atọ ụtọ na-eji ire ụtọ. 3.Its ọma ...
Tụkwasịnụ Ikike: 15000 ton / Year
sodium Carboxymethyl cellulose ( CMC ) bụ na-acha ọcha ma ọ bụ acha ntụ ntụ na bụ odorless, keenweghiuto na non-toxic.It elu hygroscopicity na bụ soluble na mmiri na-etolite a oké mmiri mmiri. Ọ bụ a polyanionic electrolyte na bụghị fermented.It nwere ezigbo okpomọkụ na-kwụsie ike .resistance ka nnu na film na-akpụ ihe onwunwe.
1.Prevent protein na acid mmiri ara ehi si condensing, na ntọala ma laminating.
2.Due ya pụrụ iche na-eji ire ụtọ sugar tapawa ala mgbe ọ dissolves, ọ ka ọṅụṅụ na-atọ ụtọ na-eji ire ụtọ.
3.Its ọma evenness na acid-eguzogide enye ọṅụṅụ na magburu onwe kwụsie ike
4.Effectively melite cracking ma ọ bụ ebube nke flakes igbari irè mmewere.
n'ihi na Food
Degree nke nnọchi (DS)
Viscosity (Na 2% Water
Chlorides (Dị ka cl - ),%
Arọ metal (dị ka Pb),%
Iron (dị ka Fe) ,%
Arsenic (dị ka Dị ka) ,%
Dị ka ọrụ ' s ina
CMC Product na-juru n'ọnụ na ihe dị n'ime polyethylene akpa mesikwuru na a 3-ply akwụkwọ akpa, ma ọ bụ akwụkwọ gbọmgbọm ma ọ bụ akwụkwọ igbe, net arọ bụ 25kg kwa akpa.
4.Transportation na Nchekwa
Ejighị ya ọnụ na ndị ọzọ ọgwụ.
Osote: Industrial ọkwa Carboxymethyl cellulose (CMC)
cellulose Industrial mezuwo CMC
Efere mezuwo CMC
CMC N'ihi Efere mezuwo
CMC N'ihi Omo
CMC N'ihi Medicine
CMC N'ihi yogot
CMC Industrial mezuwo
CMC molekụla arọ
CMC anwụnta Coils mezuwo
CMC ntụ ntụ N'ihi Siga
CMC Powder N'ihi Wallpaper
CMC Nha nha Tapawa mezuwo
CMC Ji Na Ice Ude
Good Quality CMC ntụ ntụ
High Ọcha cellulose CMC
Lithium Battery ihe CMC
Na-CMC Food mezuwo
osise mezuwo CMC
stabilizer CMC N'ihi asa ezé
ụzụ mezuwo CMC ntụ ntụ
Ụtaba mezuwo CMC ntụ ntụ
Industrial ọkwa Carboxymethyl cellulose (CMC)